Dadweynaha ku nool Kismaayo oo soo dhaweeyay furitaanka idaacada Radio Kismaayo | Radio Muqdisho
Dadweynaha ku nool Kismaayo oo soo dhaweeyay furitaanka idaacada Radio Kismaayo
Published on January 27, 2013 by Mowliid · 3 Comments · 1,914 views
Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalda Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa soo dhaweeyay furitaanka Idaacada Radio Kismaayo oo mataan la ah warbaahinta dowlada, iyagoo ka dalbaday wasaarradda warfaafinta Soomaaliya in ay sii kordhiso adeegyada warfaafineed ee ay u hayso bulshada Soomaaliyeed.
Dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in Radio Kismaayo uu noqomdoono mid ka shaqeeya isku xirka bulshada, wacyigelinta iyo horumarka ganacsiga, iyagoo sheegay in ay u baahnaayeen idaacad ay kala socdaan akhbaaraadka caalamka.
‘’Waxaan Rajeynayaa in idaacadan cusub ay noqondoonto mid ka shaqeysa danaha bulshada Soomaaliyeed, isla markaana ay horsed ka noqoto isdhexgalka iyo wacyigelinta bulshada’’ ayuu yiri Bashiir Cumar Xaaji oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Kismaayo.
Radio Kismaayo ayaa noqonaya Idaacadii ugu horeysay ee laga furo Kismaayo tan iyo markii magaaladaasi laga saaray argagixisada Shabaab Alqaacidda.
Al_Hak says:	January 27, 2013 at 5:49 pm	Waxaa idiin harey in Radio Afka maayga ku hadla laga furo Muqdisho iyo Baydhabo, Illen Dasturka ayaa sidaa qoaraaye. Waa in ay jirtaa equal opportunities.
Reply »	Qadar yare says:	February 7, 2013 at 10:32 am	Wa wax lagu farxo in idacad laga furo kismayo lkn baydhabo idacad loma geyo
Reply »	Qadar yare says:	February 7, 2013 at 10:35 am	Idacad ku hadasha afka maayga maxa loo waayey dasturku soma qoreyn. radio muqdisho maxa afka maayga loga so deyn la’yahay